मञ्जुश्री फाइनान्सको ५% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मञ्जुश्री फाइनान्सको ५% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
काठमाडौं - मञ्जुश्री फाइनान्सको ५% हकप्रद सेयर बिक्री खुला हुने भएको छ । यो फाइनान्सले १००ः५ अनुपातमा ३ लाख ६२ हजार १९० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रदमा चैत ८ गतेदेखि वैशाख १२ गतेसम्म सेयर भर्न पाइने छ ।
बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाडौं र यसका शाखा कार्यालयहरुबाट सेयर भर्न पाइनेछ । यसैगरी, मञ्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बानेश्वर काठमाडौंसहित अधिकांश शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । आस्वा प्रणालीमा सहभागी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न मिल्नेछ ।